Ngwaọrụ WordPress kacha mma maka saịtị azụmahịa | Martech Zone
Ngwa mgbakwunye kacha mma maka saịtị WordPress azụmahịa
Wednesday, May 25, 2022 Monday, June 27, 2022 Douglas Karr
Ụfọdụ ihe nrụnye WordPress bụ ewu ewu site na nrụnye nkeonwe ma ọ bụ nke ndị ahịa dabere. Kedu maka azụmahịa? Anyị achịkọtala ndepụta nke anyị ọkacha mmasị WordPress plugins na anyị kwenyere na-enyere ndị ọrụ azụmaahịa aka itinye ego na ọdịnaya ha wee chụpụ nsonaazụ site na igwe ọchụchọ na mgbasa ozi ọha, site na mkpanaka, mbadamba ma ọ bụ desktọpụ… ma jikọta usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ha na vidiyo.
N'ịbụ onye mepụtara ụfọdụ plugins WordPress na-ewu ewu, m na-anụ ọkụ n'obi mgbe niile maka ịchọta na ịkekọrịta plugins na-arụ ọrụ dị ịtụnanya iji welie, kwalite, na akpaaka ọrụ n'ime WordPress. plugins WordPress bụ ma ngọzi na nkọcha, n'agbanyeghị.
Okwu ngwa mgbakwunye WordPress
Ngwa mgbakwunye na-ahapụ mgbe ụfọdụ oghere nche na hackers nwere ike iri uru nke ịkwanye malware na saịtị gị.
Ngwa mgbakwunye anaghị ejikarị ihe niile Codkpụrụ nzuzo koodu WordPress, na-agbakwunye ekwesighi koodu nke nwere ike ibute nsogbu ndi ozo.
Ngwa mgbakwunye na-abụkarị emezighituri, na-akpata data dị n'ime ma ọ bụ nsogbu arụmọrụ.
Ngwa mgbakwunye na-abụkarị anaghị akwado, na-ahapụ gị ịdabere na koodu nwere ike ịmalite n'oge na-eme ka saịtị gị ghara ịba uru.
Ngwa mgbakwunye nwere ike ịhapụ tọn data na nchekwa data gị… Ọbụna mgbe ị iwepụ na plugin. Ndị mmepe nwere ike idozi nke a, mana anaghị echekarị gbasara ya.
Ekwenyere m na WordPress abanyela n'ezie, na-agwụpu plugins ochie site na nlele na ntinye ngwa mgbakwunye ha wee jiri aka kwado ngwa mgbakwunye ọhụrụ iji hụ na edeghị ha nke ọma. Ebe ọ bụ na WordPress na-akwado onwe gị oge na-enye gị ohere ịwụnye mgbakwunye ọ bụla, agbanyeghị, ị ga-arụ ọrụ ụlọ gị ma ọ bụ nweta akụ a tụkwasịrị obi iji kwado gị.
Na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime Best WordPress Plugins Nsuso ahaziri na onye na-ede blọgụ nkeonwe ma etinyela uche na azụmaahịa na mbọ ha pụrụ iche n'ichepụta na imepụta atụmatụ ọdịnaya nke na-enyere aka ịkwalite azụmahịa ha. Ọzọkwa, anyị niile maara nke ahụ kasị mma bụ okwu gbasara onwe ya… yabụ anyị ga-eji ọkacha mmasị gaa iche iche ndụmọdụ anyị.
N'okpuru bụ a nwara na ezi set nke WordPress plugins maka azụmahịa na anyị kwenyere na ha kachasị mma na mbara ala WordPress plugins.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma maka ndabere saịtị na Mbugharị
Mbugharị WP – E nwere nnọọ ole na ole n'ezie nnukwu plugins si n'ebe na-eme mfe backups na migrations, ma mgbe ị chọrọ n'ezie nweta granular na ihe faịlụ, gburugburu, na plugins na ndabere ma ọ bụ kwaga, a ngwa mgbakwunye karịa ihe ọ bụla na-atụ anya. Ọzọkwa, ị nwere ike ibugharị saịtị n'ụzọ dị mfe n'etiti ibe gị - ọbụlagodi iwetu ikike nke saịtị nwere ike ịkwanye ma ọ bụ dọta n'otu n'otu.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma iji tinye aka na tụgharịa ndị ọbịa
Ihe – Ọ bụrụ na ị na-achọ mfe tinye ihe omume, na ndebanye aha gafee multiple ebe maka azụmahịa gị, a plugin na-ma na-akwado nke ọma na nwere ton nke atụmatụ.
ndọda Forms - Nrụpụta ngwa ngwa ma dị mfe yana nhọrọ nhazi dị iche iche jikọtara ya na ọrụ ndị ọzọ dị ka PayPal, Mailchimp, AWeber, na ndị ọzọ. Tinye-ons na API dị maka arụrụ arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji Elementor Pro, ị chọghị ya ebe fọm bụ akụkụ ya.
Pụta ìhè & Ekekọrịta - ngwa mgbakwunye maka ịkọwapụta ederede na ịkekọrịta ya site na Twitter na Facebook na ọrụ ndị ọzọ gụnyere LinkedIn, Email, Xing, na WhatsApp. Enwekwara ngọngọ Gutenberg ga-eme ka ndị ọrụ gị Pịa Kee.
OptinMonster - Mepụta ụdị opt-grabbing na-eme ka ndị ọbịa ghọọ ndị debanyere aha na ndị ahịa. Họrọ site na popups, ụgbọ mmiri na-ese n'elu mmiri, slide-ins, na ndị ọzọ iji mepụta ụdị opt-in gị na 60 sekọnd ewepụghị.
Jetpack - Jetpack na-aga n’ihu na-emeziwanye ma mbipute efu na nke akwụrụ ụgwọ na-agbatị ikike nke saịtị WordPress gị. Akụkụ abụọ dị mkpa m kwenyere bụ ikike mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe gị site na nkwalite email. Enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ, agbanyeghị! Kachasị mma, ngwa mgbakwunye a bụ nke Automattic mepụtara ka ị mara na edere ya ma debe ya na ọkwa kachasị elu.
WooCommerce - usoro ikpo okwu eCommerce kachasị ewu ewu maka iwuli ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. A na-akwado Woocommerce n'ụzọ zuru ezu na ụda nkwalite na plugins site na otu na Automattic, ndị mmepe nke WordPress.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma iji kwalite nchịkwa WordPress gị
Dochie Nchọgharị Ka Mma - enwere oge mgbe ịchọrọ ịga nyocha / dochie na nchekwa data maka ọdịnaya, njikọ, ma ọ bụ ntọala ndị ọzọ. Ihe mgbakwunye a bụ nhọrọ dị ukwuu maka ịme nke ahụ.
Gbanyụọ Comments – Azịza na-aba uru dị ukwuu na ọkwa ọchụchọ yana itinye ndị ọbịa saịtị gị aka; Otú ọ dị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya okwu spamming aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịchịkwa na mkparịta ụka ahụ kwagara na ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi. Ngwa mgbakwunye a ga-ewepụ atụmatụ niile metụtara ikwu ma wepụ akụkụ nkọwa na ibipụta na saịtị gị. Ị nwekwara ike ihichapụ nkwupụta niile ebipụtara.
Post nke abụọ - ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị ọdịnaya gị, ngwa mgbakwunye a na-enye njikwa zuru oke nke ọrụ nwere ike ịmegharị ọdịnaya, kedu ihe ndị emegharịrị, na ndị ọzọ.
Njikwa Tag Google maka WordPress - jikwaa edemede gị niile na omume ndị ọzọ sitere na Google Tag Manager. Ihe mgbakwunye a bụ kpọmkwem maka WordPress ma na-enye ụda nhọrọ.
Ndepụta Post gosipụtara foto - na-agbakwụnye na Foto a na-apụta kọlụm na nchịkwa posts na ndepụta peeji nke. Ọ na-ahapụ ndị nchịkwa hụ ọkwa ma ọ bụ ibe nwere atụmatụ eserese gosipụtara.
Ndenye drafts nweta - you na-ejikwa ọtụtụ drafts? Ọ bụrụ otu a, ngwa mgbakwunye a na - etinye ụzọ dị ukwuu na nchịkọta nhọrọ nchịkwa gị nke ga - ewetara gị ozugbo na drafts gị (yana igosipụta ọnụ ọgụgụ).
Kit Site nke Google - Ngwọta nkwụsị iji dozie, jikwaa, ma nweta nghọta sitere na ngwaọrụ Google dị oke mkpa iji mee ka saịtị ahụ gaa nke ọma na weebụ. Ọ na-enye ikike nghọta sitere na ọtụtụ ngwaahịa Google ozugbo na WordPress dashboard maka nnweta dị mfe, niile n'efu.
Nbanye nwa oge na-enweghị paswọọdụ - enwere oge ịchọrọ ịnye isiokwu ma ọ bụ onye nrụpụta ngwa mgbakwunye ohere ịnweta WordPress gị nwa oge… mana ị nweghị ike ịgafe usoro ime ka ha debanye aha wee nweta okwuntughe site na email. Ngwa mgbakwunye a na-enye njikọ ozugbo, nwa oge ha nwere ike iji banye na saịtị gị iji nyere gị aka. Ị nwekwara ike ịtọ oge njedebe.
Akwụkwọ ndekọ WP - ọ bụrụ na ị chetụla echiche ma a na -ezipụ ozi ịntanetị na saịtị gị site na PHP ma ọ bụ SMTP, WP Mail Log bụ ngwa mgbakwunye dị mkpa iji soro ozi mbubata gị.
WP niile Bubata - Nchịkọta plugins na-enweghị atụ na-agbanwe agbanwe maka mbubata na mbupụ data sitere na faịlụ XML na CSV n'ime na pụọ ​​na WordPress yana ọtụtụ plugins ewu ewu.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma maka nhazi na ndezi
Ngwa ederede bara ọgaranya maka Gutenberg – Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ ndị ọzọ styling na ndabara Gutenberg editọ na WordPress, gụnyere koodu, ndebanye aha, superscript, inline ederede, na ndabere agba edezi… ​​a mfe ngwa mgbakwunye na-enye niile ike.
Elementor Pro - Onye nchịkọta akụkọ ala maka WordPress nwere ọtụtụ ihe achọrọ ma nwee ike ịda mba. Elementor emeela agadi na onye nchịkọta akụkọ WYSIWYG mara mma, ụdị, njikọta, nhazi, ndebiri na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ nwere ọtụtụ plugins na -eso ka ịgbatị ya. Amaghị m na m ga -ewu saịtị na -enweghị ya!
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma iji kwalite ọdịnaya gị yana iru ya
Uzo Omenala di elu - Mee ka ọ dị mfe ndị nchịkwa, ndị edemede na ndị editọ ịhazi ebe nrụọrụ weebụ gị site na ime ka nlekọta ya dị mfe. ACF dị mfe iji mejuputa ma na-ahaziri ya nke ọma. Zụta mgbakwunye ndị agbakwunyere ikike maka ụfọdụ atụmatụ dị egwu.
ARVE Advanced Responsive Video Embedder – Vidiyo agbakwunyere nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma maka idowe nhazi nleba anya na saịtị gị. WordPress na-agbakwunyere ọtụtụ nyiwe mana anaghị achọpụta na ha na-anabata ya.
Mpempe Azụmahịa Ndị Dị Mfe - Na-enyere gị aka ịkekọrịta, nyochaa, na ịbawanye okporo ụzọ mmekọrịta gị site na iji ọtụtụ nhazi na nchịkọta atụmatụ.
Mfe WP SMTP - Izipu ozi WordPress, ọkwa, na ozi ịntanetị akpaghị aka sitere na ndị na -eweta nnabata gị na -arịọ nsogbu. Iji SMTP izipu ozi -e site n'aka onye na -ahụ maka ọrụ gị nwere nchekwa karịa ma nwee ohere ịpụta. Anyị nwere akụkọ na -egosi otu esi ahazi nke a Google or Microsoft.
Feedpress - FeedPress na-akpaghị aka na-ejikwa redirections na mmelite ndepụta gị na ezigbo oge ọ bụla ị bipụtara ọkwa ọhụrụ.
Otu akara - mkpanaka mkpanaka, ntinye weebụ, email, na ozi ngwa. Gwa ndị debanyere aha na ọkwa ọ bụla bipụtara.
Ngwaọrụ Ngwaọrụ Podcast - Nke a bụ wijetị nke m mepụtara nke na-ewu ewu. Ọ bụrụ na ị na-akwado gị Podcast n'ebe ọzọ, ị nwere ike tinye ndepụta ma tinye pọdkastị gị na sidebar gị ma ọ bụ jiri shortcode n'ime ibe ma ọ bụ post. Ọ na-eji WordPress 'nwa afọ HTML ọdịyo ọkpụkpọ.
GTranslate - Jiri ngwa mgbakwunye na ọrụ a iji tụgharịa ọdịnaya gị na-akpaghị aka ma bulie saịtị WordPress gị maka nchọta mba ụwa.
Kwusaanụ na Apple News - Na-enyere gị WordPress blog ọdịnaya ka e bipụtara gị Apple News ọwa.
na nso nso - Tinye wijetị na ụkwụ gị na ọdịnaya gị kachasị ọhụrụ iji nye ụfọdụ njikọ dị n'ime na itinye aka. Ngwaọrụ a nwere ọtụtụ nhọrọ nhazi usoro.
Dịghachi posts ochie - Gini mere ị ga - eji keta ọdịnaya gị otu mgbe ị nwere ike ịkekọrịta oke ọdịnaya ugboro ugboro… na-akwọ ụgbọala na ịmara ntinye ego gị?
Posts ndị a ma ama nke WordPress - Tinye wijetị na ihe nrụnye gị n'okpuru ọdịnaya gị kachasị ewu ewu iji mee ka ọkụ na posts na ibe ndị ahụ. Ihe mgbakwunye a wuru otu onye edemede nke Nso nso a, ma nwee ụfọdụ ndebiri arụnyere na-aga nke ọma!
WP PDF - Wepu PDF-mobile-friendly mobile na WordPress - ma gbochie ndị na - ekiri gị ibudata ma ọ bụ bipụta faịlụ izizi gị.
ProfaịlụPress - WordPress ugbu a na-enye gị ohere iji avatars omenala ndị a na-ebugo site na Gravatar. WP User Avatar na-enyere gị aka iji foto ọ bụla etinye na Media Library gị dị ka avatar.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma iji kwalite saịtị WordPress gị
Ihe nlele onyonyo Kraken - Optimizes oyiyi na thumbnails na ada, na-enyere gị aka belata ihe oyiyi na ibu oge na-enweghị adịkwa mma.
CDN StackPath - Mechie oge ngwa ngwa ngwa ngwa, ọkwa Google ka mma, yana ntụgharị ndị ọzọ na StackPath CDN. Mbido dị mfe ma na-ewe nkeji.
WordPress SEO -Math Rank bụ ngwa mgbakwunye SEO dị nfe nke gụnyere nyocha ọdịnaya ọdịnaya, maapụ saịtị XML, snippets bara ụba, ntụgharị, nleba anya 404, na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Ụdị pro nwere nkwado dị egwu maka snippets bara ụba, ọtụtụ ebe na ihe ndị ọzọ. Nke kachasị, edere koodu ahụ nke ọma na anaghị akwụsịlata saịtị gị dịka plugins SEO SEO ndị ọzọ.
WP Kaiser - Mee WordPress ngwa ngwa na clicks ole na ole. A ghọtara nke a dị ka ngwa mgbakwunye caching kachasị ike nke ndị ọkachamara WordPress.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma maka kuki na nnabata data
Dịka azụmahịa, ịkwesịrị ịkwado iwu mba ụwa, gọọmentị etiti, na nke steeti na-achịkwa otu ị si eso ma debe data ndị ọbịa gị. Anọ m na-eji wijetị Jetpack maka ikikere kuki, mana ọ na-ebukarị ihe karịrị otu oge na enweghị nhọrọ nhazi.
GDPR Nkwenye Kuki (CCPA Njikere) - Ihe GDPR Kuki nke nkwenye ga-enyere gị aka ime ka weebụsaịtị gị GDPR (RGPD, DSVGO) kwenye. Na mgbakwunye na nnabata nke GDPR WordPress ngwa mgbakwunye ahụ na-akwado nkwado kuki dị ka LGPD nke Brazil na California Consumer Privacy Act (CCPA) nke bụ ụkpụrụ steeti echere iji bulie ikike nzuzo na nchebe ndị ahịa maka ndị bi na California.
Ngwa mgbakwunye WordPress kacha mma iji chebe saịtị WordPress gị
Akismet - Ihe mgbakwunye kachasị ewu ewu na WordPress, Akismet bụ ụzọ kachasị mma n'ụwa iji kpuchido blog gị na spam na trackback spam. Ejirila ya tinye ya, kọọ ihe ndị ahụ!
VaultPress - Chedo ọdịnaya gị, gburugburu, plugins na ntọala gị site na iji nkwado ndabere oge yana nyocha nchekwa akpaghị aka.
Ọrụ WP Ọrụ - Ngwa mgbakwunye ọrụ ọrụ WordPress zuru oke iji dobe ndekọ nke mgbanwe onye ọrụ, mee ka nchọpụta nsogbu dị mfe, ma chọpụta omume enyo n'oge iji gbochie hacks ọjọọ. Ọ bụrụ na ị denye aha Nchekwa Jetpack or Ọkachamara Jetpack ị ga-enwetakwa ndekọ ndekọ ọrụ zuru oke.
E nwere ụfọdụ ọmarịcha, nkwụnye ụgwọ akwụ ụgwọ nke akwadoro nke ọma Okwu na ị gaghị ahụ ebe ọzọ. Lọ ọrụ nne na nna, Envato, na-arụ nnukwu ọrụ iji hụ na akwadoro plugins mgbe niile.
Ngosipụta: Ana m eji Mgbakwunye Koodu N'ime oge a, biko kwado mbipụta m site na ịpị ma zụta ha!
Tags: Akismetkacha mma pluginskasị mma wordpress pluginsazụmahịa WordPress pluginsccpacdnnnabata ngwa mgbakwunyeiwu kukioyiri postsplugins ọkacha mmasịplugins wordpress ọkacha mmasịNchịkwaihe ntanetị googlegutenbergọkpụkpọ PodcastPubSubHubbubohere drafts oherená mgbakọ na mwepụrediregharịedezi ederede bara ụbaụzọNgwaọrụ wijetịwijetịWordPresswordpress oditi logwordpress ndabere ngwa mgbakwunyecdn wordpresswordpress cdn ngwa mgbakwunyewordpress ecommerce ngwa mgbakwunyewordpress ụdị ngwa mgbakwunyeWordPress pluginswordpress Podcast ngwa mgbakwunyewordpress smtp ngwa mgbakwunyewordpress na-elekọta mmadụ òkè pluginrp wp
TaskHuman: Platform nkuzi ịre ahịa dijitalụ ezigbo oge
Jenụwarị 5, 2015, elekere 11:21 nke abalị
Ezigbo ndepụta na infographic. Dị ka ọ dị na mbụ, ụfọdụ ọkacha mmasị ochie, ama ama na ụfọdụ ndị ọhụrụ m ga-elele! Daalụ maka ịkekọrịta.
Jenụwarị 6, 2015, elekere 1:53 nke abalị
Amaghị m otu ị ga-esi kwuo na ibe a nwere ike ịgụ? Ekwesịrị m ịpịgharịa na ọkara ala maka ihe m ga-agụ ma ọ baghị uru. Ọ bụrụ na ị na-eche a 3/4 page sidebar nke na-egbuke egbuke agba bọtịnụ na mmapụta na-anọgide na-akpasu m iwe bụ azụmahịa ahịa, mgbe ahụ ị na-efunari ya. Naanị ihe na-esiri m ike bụ ide ihe a ka m kọọrọ gị ihe dị ka gị na m nwere. Nke ahụ bụ CHASE na CHASE. Enwere m ike na ụlọ akwụkwọ ochie na teknụzụ webụsaịtị na-aga n'ihu n'ezie. Mana n'ezie ịre ahịa ka bụ iwulite kọntaktị azụmahịa yana ị nweta ozi na ndị na-asọ gị asọmpi? Ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ gị bụ ndị kpuru isi awọ. M n'ezie na-aga otú ahụ.
Daalụ maka nzaghachi, Steve. Anyị na-enye gị ọdịnaya ebe a na-akwụghị gị ụgwọ yana ndị na-agụ akwụkwọ anyị nwere ọnụọgụ abụọ ruo ọtụtụ afọ. Enwere m mmasị ịga n'ihu na-arụ ọrụ na ntụzịaka ndị na-akwado anyị, ndị mgbasa ozi anyị, na ndị nkwado anyị. Echiche kacha mma.
Julaị 9, 2015, elekere 9:48 nke ehihie
Ndewo Douglas! Blọọgụ na-atọ ụtọ ị nwere ebe a. Nnukwu enyemaka. Daalụ.
Julaị 10, 2015, elekere 12:21 nke ehihie
Daalụ! Ma ị dị mma!